China Cutting ute maka Silhouette, 8824, 12 ″ x24 ″ ịcha ute maka Silhouette cameo Nlụpụta na Factory | Allwin
Na-arụ ọrụ zuru oke maka Silhouette Cameo4 / 3/2/1 ihe kacha mma DIY na-arụ ọrụ ịkụcha ihe na kọmputa.
A na-ahazi ihe mgbochi ihe nfe siri ike maka ihe dị arọ, ihe a tụrụ aro maka nnukwu kaadị, ihe na-egbuke egbuke, ihe magnet, bọọdụ akwụkwọ, akwa na stiffener.
A na-eji PVCchacha ahịhịa na-edochi edochi edo edo, nke na-egbu osisi na 12 * 24 (anụ ọhịa)
Debe ihe nkpuchi ihe nkpuchi doro anya na ihe oyiyi ihe oyiyi a nke Silhouette mgbe ị na-echekwa ka ị na-egbutu ihe nkwụ na-enweghị ntụpọ na ájá. Jiri scraper ka kpochapu oke iberibe na spatula iji jiri nlezianya wepu ihe oyiyi bee.
Ndị a Mats nwere ikike kwesịrị ekwesị iji jide ihe gị n'ụzọ siri ike n'oge ma kwe ka iwepụ ihe dị mfe. Cha akwa dị mma maka ndị ọrụ nka, quilters, ụmụ akwụkwọ nka na ihe omume ntụrụndụ ịme ọtụtụ Mee N'onwe Gị.
Product akụkụ 325x640 mm
Ekike nke igwe Silhouette Cameo4 / 3/2/1
Nke gara aga: Cha ute maka Silhouette, 8812, 12 ″ x12 ″ ịcha ute maka Silhouette cameo
Osote: Cha ute maka Silhouette, 8824, 12 ″ x24 ″ ịcha ute maka Silhouette cameo
3 n'ígwé A5 tingcha ute, 883A5, Self agwọ Cu ...
3 n'ígwé A1 tingcha ute, 883A1, Self agwọ Cu ...